Tag: nwata isiokwu | Martech Zone
Tag: nwata isiokwu
Na-agbanwezi ederede WordPress na ezighi ezi. Anyị ejirila ọtụtụ ndị ahịa rụọ ọrụ wee wuo ọtụtụ narị saịtị WordPress ọtụtụ afọ. Ọ bụghị na ọrụ anyị bụ ịmepụta saịtị WordPress, mana anyị na-eme ya maka ọtụtụ ndị ahịa. Ndị ahịa anaghị abịa iji saịtị WordPress oge niile. Ha na-abịakwute anyị iji nyere aka bulite saịtị ha maka ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ntụgharị. Ọtụtụ mgbe, anyị nwere ike ịnweta saịtị ahụ
Taa, a na m enyocha ugboro abụọ ederede m dere wee chọpụta na post metụtara ya nke sitere na 9 afọ gara aga n'elu ikpo okwu na-adịkwaghị. Ya mere, ekpebiri m ileba anya na nhọrọ ntinye nke Jetpack na saịtị m wee hụ ma m nwere ike ịkwụsị oke ụbọchị. Jetpack na-arụ ọmarịcha ọrụ ịhọrọ nhọrọ ndị dị mkpa yiri nke ahụ, mana ọ dị nwute, ọ nweghị